စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးမှုပညာသင်တန်းကျောင်းအား တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် လာရောက်မည်ဖြစ်သည်
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို မေ ျှာ်လင့်ထားတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ
အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အသိုက်အဝန်းဟာ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အခွင့်အရေးတွေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပိုမိုရရှိလာမယ်လို့ မေ ျှာ်လင့်ထားကြပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၉ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး တိုးမြှင့်ရန် ရည်မှန်းချက်သစ်အား ပြည့်မီရန်နှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယကုန်သည်များ တွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး Ms Nirmala Sitharaman သည် မြန်မာ-အိန္ဒိယစီးပွားရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယနေ့လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေးနှင့်.
၎င်းတို့အား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဆောင်သောအဖွဲ့က ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိပဲ နေပြည်တော်အထိ ချီတက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအား နောက်ထပ် သက်တမ်း ၁၂ လ ထပ်တိုးရန်နှင့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ်များအား ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်မည့်အကြောင်းကို အမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားက ကွန်ဂရက်အား မေ ၁၇ ရက်တွင် အသိပေးမည် ဖြစ်သည်။ မေ ၁၈ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည့် အဆိုပါပိတ်ဆို့မှုအရ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏.
ကားလမ်းပေါ်မှ မိခင်များ(ဝါ) ရန်ကုန်မြို့မှ အမျိုးသမီး အငှားယာဉ်မောင်းများ
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမျိုးသမီး အငှားယာဉ်မောင်းသမားများသည် အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းပါးနေပါသေးသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ထဲတွင် အမှီအခိုကင်းသော ရဲရင့်သည့် မိခင်နှစ်ဦး ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
အလုပ်သမားသပိတ်အဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်တို့ ထိပ်တိုက်မတွေ့ရန် ကြိုးပမ်းမှု လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေဆဲ
မေ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ချီတက်ကြမည့် သပိတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်တို့ တပ်ကုန်း မြို့နယ်အဝင်တွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနိုင်သည့် အခြေအနေမှာ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနကို အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ထားရှိမည်
ဌာနတွင် ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်
ထရီဗာ ဝီလ်ဆင် ရေးသားသည်။